Genesisi Eksodho Revhitiko Numeri Dheuteronomio Joshua Vatongi Rute 1 Samueri 2 Samueri 1 Madzimambo 2 Madzimambo 1 Makoronike 2 Makoronike Ezra Nehemiya Esteri Jobho Mapisarema Zvirevo Muparidzi Rwiyo rwaSoromoni Isaya Jeremiya Mariro Ezekieri Dhanieri Hosiya Joeri Amosi Obhadhiya Jona Mika Nahumi Habhakuki Zefaniya Hagai Zekariya Maraki Mateu Mako Ruka Johani Mabasa VaRoma 1 VaKorinde 2 VaKorinde VaGaratiya VaEfeso VaFiripi VaKorose 1 VaTesaronika 2 VaTesaronika 1 Timoti 2 Timoti Tito Firimoni VaHebheru Jakobho 1 Petro 2 Petro 1 Johani 2 Johani 3 Johani Judha Zvakazarurwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
31 Zvino Jehovha akataura naMosesi, achiti: 2 “Tsiva+ vaMidhiyani+ nokuda kwevanakomana vaIsraeri. Pashure paizvozvo uchaiswa kwakaiswa vanhu vokwako.”+ 3 Naizvozvo Mosesi akataura nevanhu, achiti: “Gadzirirai varume vari pakati penyu nokuda kwehondo, kuti varwise Midhiyani kuti vatsivire Jehovha Midhiyani.+ 4 Muchatumira vane chiuru kubva mudzinza rimwe nerimwe pamadzinza ose aIsraeri kuhondo.” 5 Naizvozvo dzinza rimwe chete rakapa chiuru chimwe chete chaibva muzviuru+ zvaIsraeri, zviuru gumi nezviviri zvakanga zvakagadzirira hondo.+ 6 Zvino Mosesi akavatuma kuhondo, chiuru chimwe chete chedzinza rimwe nerimwe, ivo naFiniyasi+ mwanakomana womupristi Eriyezari kuhondo, uye midziyo mitsvene nemabhosvo+ okushevedzera nawo zvaiva muruoko rwake. 7 Vakarwa naMidhiyani, sezvakanga zvarayirwa Mosesi naJehovha, vakauraya vanhurume vose.+ 8 Vakauraya madzimambo eMidhiyani pamwe chete nevamwe vakaurayiwa, aiti, Evhi naRekemu naZuri naHeri naRebha, madzimambo mashanu eMidhiyani;+ uye vakauraya Bharami+ mwanakomana waBheori nebakatwa. 9 Asi vanakomana vaIsraeri vakatapa vakadzi veMidhiyani nevana vavo;+ uye vakapamba zvipfuwo zvavo zvose nemombe dzavo dzose nezvinhu zvavo zvose zvokurarama nazvo. 10 Vakapisa nomoto maguta avo ose avaigara nemisasa yavo yose yaiva nemasvingo.+ 11 Vakatora zvinopambwa zvose+ nezvose zvinotorwa nechisimba zvakadai sevanhu nezvipfuwo. 12 Vakauya nenhapwa nezvakatorwa nechisimba nezvakapambwa kuna Mosesi nomupristi Eriyezari nokuungano yevanakomana vaIsraeri, kumusasa, kumapani erenje eMoabhi,+ ari pedyo naJodhani kuJeriko. 13 Zvino Mosesi nomupristi Eriyezari nemachinda ose eungano vakabuda kuti vavachingure kunze kwomusasa. 14 Mosesi akatsamwira varume vakagadzwa vemauto,+ vakuru vezviuru nevakuru vemazana vakanga vachibva kuhondo. 15 Naizvozvo Mosesi akati kwavari: “Makachengetedza vanhukadzi vose vari vapenyu here?+ 16 Tarirai! Ndivo vakakurudzira vanakomana vaIsraeri kuti vave vasina kutendeka+ kuna Jehovha pamusoro pezvakaitika paPeori,+ vachishandisa zvakataurwa naBharami, zvokuti denda rakawira ungano yaJehovha.+ 17 Saka urayai vanhurume vose pavana, uye urayai vakadzi vose vakaziva murume nokurara nomunhurume.+ 18 Chengetedzai vaduku vose vari pakati pevakadzi vasina kumboziva kurara nomunhurume vari vapenyu.+ 19 Asi imi dzikai musasa kunze kwomusasa kwemazuva manomwe. Munhu wose akauraya mweya+ uye munhu wose akabata munhu akaurayiwa,+ muzvichenese+ pazuva rechitatu nepazuva rechinomwe, imi nenhapwa dzenyu. 20 Munofanira kuchenesa nguo dzose nezvinhu zvose zvakagadzirwa nedehwe nezvinhu zvose zvakagadzirwa nemvere dzembudzi nezvinhu zvose zvakagadzirwa nematanda kuti zvibve chivi.”+ 21 Mupristi Eriyezari akabva ati kuvarume veuto vakanga vaenda kunorwa: “Uyu ndiwo murau womutemo wakarayirwa Mosesi naJehovha, 22 ‘Ndarama nesirivha, mhangura, simbi, tini nomutobvu zvoga, 23 izvo zvinhu zvose zvisingatsvi+ munofanira kuzvipfuudza nomumoto, uye zvichava zvakachena. Asi zvinofanira kunatswa nemvura kuti zvicheneswe.+ Zvinhu zvose zvinotsva munofanira kuzvipfuudza nomumvura.+ 24 Munofanira kugeza nguo dzenyu pazuva rechinomwe mova vakachena, uye pashure paizvozvo mungapinda mumusasa.’”+ 25 Zvino Jehovha akati kuna Mosesi: 26 “Iwe nomupristi Eriyezari nevakuru vemadzibaba eungano, verengai zvinhu zvakatorwa nechisimba, zvakatapwa zvose, vanhu nezvipfuwo. 27 Unofanira kukamura zvinhu zvakatorwa nechisimba kuva migove miviri pakati pevaya vanorwa hondo vakaenda kunorwa nevamwe vose veungano.+ 28 Unofanira kutora mutero+ waJehovha kuvarume vehondo vakaenda kunorwa, mweya mumwe chete pamazana mashanu, pavanhu nepamombe nepambongoro nepamakwai. 29 Uutore pahafu yavo woupa mupristi Eriyezari kuti uve mupiro waJehovha.+ 30 Pahafu yevanakomana vaIsraeri unofanira kutora mumwe chete pamakumi mashanu, pavanhu, pamombe, pambongoro nepamakwai, pazvipfuwo zvemarudzi ose, uye unofanira kuzvipa vaRevhi,+ vachengeti vezvinhu zvinosungirwa kuti zviitirwe tebhenekeri yaJehovha.”+ 31 Zvino Mosesi nomupristi Eriyezari vakaita sezvakanga zvarayirwa Mosesi naJehovha. 32 Zvakatorwa nechisimba, zvimwe zvakapambwa zvose zvakanga zvatorwa nevanhu vehondo sezvinopambwa, zvakasvika makwai zviuru mazana matanhatu nemakumi manomwe nezvishanu, 33 nemombe zviuru makumi manomwe nezviviri, 34 nembongoro zviuru makumi matanhatu nechimwe chete. 35 Asi mweya yevanhu,+ yevakadzi vakanga vasina kumboziva kurara nomunhurume,+ mweya yacho yose yaiva zviuru makumi matatu nezviviri. 36 Hafu yaiva mugove wevaya vakaenda kunorwa yakasvika makwai zviuru mazana matatu nemakumi matatu nezvinomwe nemazana mashanu. 37 Mutero+ waJehovha wakabva pamakwai wakava mazana matanhatu nemakumi manomwe nemashanu. 38 Mombe dzaiva zviuru makumi matatu nezvitanhatu, uye mutero waJehovha wakabva padziri waiva makumi manomwe nembiri. 39 Mbongoro dzaiva zviuru makumi matatu nemazana mashanu, uye mutero waJehovha wakabva padziri waiva makumi matanhatu neimwe. 40 Mweya yevanhu yaiva zviuru gumi nezvitanhatu, uye mutero waJehovha wakabva pairi waiva mweya makumi matatu nemiviri. 41 Mosesi akabva apa mupristi Eriyezari+ mutero kuti uve mupiro waJehovha, sezvakanga zvarayirwa Mosesi naJehovha.+ 42 Uye pahafu yezvaiva zvevanakomana vaIsraeri, yakakamurwa naMosesi pazvinhu zviya zvaiva zvevarume vakarwa hondo: 43 Zvino hafu yeungano yakabva paboka remakwai yakasvika zviuru mazana matatu nemakumi matatu nezvinomwe nemazana mashanu, 44 uye mombe dzakasvika zviuru makumi matatu nezvitanhatu, 45 mbongoro dzakasvika zviuru makumi matatu nemazana mashanu, 46 mweya yevanhu yakasvika zviuru gumi nezvitanhatu. 47 Zvino Mosesi akatora pahafu yevanakomana vaIsraeri chimwe chete chaifanira kutorwa pamakumi mashanu, pavanhu nepazvipfuwo, akazvipa vaRevhi,+ vachengeti vezvinhu zvaisungirwa kuti zviitirwe+ tebhenekeri yaJehovha, sezvakanga zvarayirwa Mosesi naJehovha. 48 Zvino varume vakagadzwa vaiva mapoka ezviuru zveuto,+ vakuru vezviuru nevakuru vemazana,+ vakaswedera kuna Mosesi, 49 vakati kuna Mosesi: “Vashandi venyu vaverenga varume vehondo vatinotarisira uye hapana kana mumwe anzi ashayikwa kwatiri.+ 50 Naizvozvo regai mumwe nomumwe wedu ape zvaakawana kuti chive chinopiwa chaJehovha,+ zvinhu zvendarama, tucheni twomuzviziso zvemakumbo, nezvishongo zvemaoko, marin’i ane zvidhindo,+ mhete, nezvishongo zvevakadzi,+ kuti tiyananisire mweya yedu pamberi paJehovha.” 51 Naizvozvo Mosesi nomupristi Eriyezari vakagamuchira ndarama yacho yakabva kwavari,+ zvishongo zvacho zvose zvinokosha. 52 Ndarama yose yomupiro wavakapa Jehovha yakasvika mashekeri zviuru gumi nezvitanhatu nemazana manomwe nemakumi mashanu, yakabva kuvakuru vezviuru nevakuru vemazana. 53 Mumwe nomumwe wevarume veuto akanga atora zvakapambwa.+ 54 Naizvozvo Mosesi nomupristi Eriyezari vakagamuchira ndarama yakabva kuvakuru vezviuru nevemazana, vakapinda nayo mutende rokusanganira kuti ive chiyeuchidzo+ kuvanakomana vaIsraeri pamberi paJehovha.